के तपाई एप्पलमा काम गर्न चाहानुहुन्छ? उनीहरूले तपाइँलाई के सोध्न सक्छन् हेर्नुहोस् आईफोन समाचार
के तपाई एप्पलमा काम गर्न चाहानुहुन्छ? उनीहरूले तपाइँलाई के सोध्न सक्छन् हेर्नुहोस्
काटिएको स्याउको धेरै प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो दिमाग कहिल्यै पार गरेका छैनन् स्याउ को लागी काम, यो एक यूटोपियन विचारमा छ भने पनि। कुनै पनि ठूला कम्पनीमा जस्तै, एप्पलमा त्यहाँ धेरै रोजगारीहरू उपलब्ध छन् र यी मध्ये केही सफ्टवेयर ईन्जिनियरहरूको लागि कुनै पनि भौतिक एप्पल स्टोरमा हामीलाई सहभागी गर्नेहरू हुन्। मलाई थाहा छैन कि स्टोरमा यन्त्रहरू बेच्न लाग्ने एक व्यक्तिलाई कस्तो किसिमको प्रश्नावली भर्न भनियो, यदि तिनीहरूले सोध्छन्, तर महत्त्वपूर्ण पदहरूको लागि उनीहरूले गर्छन् र प्रश्नहरू सबैभन्दा आश्चर्यजनक हुन सक्छ.
यी प्रश्नहरू तपाईंलाई दिइयो सिसाको ढोका Business Insider मा र मैले तिनीहरूलाई अंग्रेजी-बोल्ने ब्लग Cult of Mac मा पढेको छु। यो एकदम जिज्ञासु भयो कि म यसलाई आईफोन समाचारमा पनि प्रतिध्वनित गर्न चाहान्छु। म तपाईंलाई कुनै पनि प्रश्नको उत्तर दिन चुनौती दिन्छु, तर तपाईं सधैं यो सोच्नुहुन्छ कि तपाईं सही हुनुहुन्छ कि गलत भनेर सोच्नुहोस्, किनकि उत्तरहरू प्रकाशित गरिएको छैन। म तपाईंलाई प्रश्नहरु संग छोड्छु।
«यदि तपाईंसँग दुई अण्डाहरू छन् र तपाईं जान्न चाहानुहुन्छ कि सब भन्दा माथिल्लो तल्ला कुन हो जहाँ तपाईं तिनीहरूलाई नतोडेर फाल्न सक्नुहुन्छ, तपाईं कसरी गर्नुहुन्छ? इष्टतम समाधान के हो? सफ्टवेयर ईन्जिनियर उम्मेद्वारको लागि प्रश्न।
"हरेक दिन कति जना बच्चाहरु जन्मिन्छन्?" ग्लोबल आपूर्ति प्रबन्धकका लागि सोध्नुहोस्।
«तपाईंसँग एक टेबलमा १०० सिक्का रहेको छ, टाउको र पुच्छर सहित प्रत्येक सिक्का (तिनीहरू सिक्काको दुबै छेउमा स्पेनमा भन्छन्)। ती मध्ये १० अनुहार अपमा छन् र ती मध्ये 100 ० क्रस अपसँग छन्। तपाईले अनुभव गर्न सक्नुहुन्न, हेर्न सक्नुहुन्न र जान्न सक्नुहुन्न जुन अरूले सामना गरिरहेका छन्। दुईवटा ढेरमा सिक्का अलग गर्नुहोस् ताकि प्रत्येक पाइलमा समान अंकहरू छन्। सफ्टवेयर ईन्जिनियरका लागि।
“त्यहाँ तीनवटा बाकसहरू छन्, एउटा केवल स्याउ भएको, एउटा मात्र सुन्तला युक्त, र एउटा स्याउ र सुन्तला दुबै। बक्सहरू गलत लेबल गरिएको छ, त्यसैले कुनै लेबलले बाकसको वास्तविक सामग्री पहिचान गर्दैन। केवल एउटा बाकस खोल्दै र यसमा नहेरी, उसले फलको एक टुक्रा लिन्छ। फललाई हेर्दै, तपाईं कसरी सबै बक्सहरू सही रूपमा लेबल गर्न सक्नुहुन्छ? सफ्टवेयर गुण नियन्त्रण ईन्जिनियरका लागि।
"यस कलमको लागत खण्डन कस्तो देखिन्छ?" ग्लोबल आपूर्ति प्रबन्धक
"तपाई सुन्दर हुनुहुन्छ?"। निर्माण ईन्जिनियरका लागि।
“तपाईंले टर्नटेबलमा पानीको गिलास राख्नुभयो र तपाईं बिस्तारै गति बढाउन थाल्नुहुन्छ। के हुन्छ पहिले के हुन्छ: गिलास स्लाइड हुनेछ, यो टिप हुनेछ वा पानी बाहिर आउँछ? मेकानिकल ईन्जिनियरका लागि।
"के बढि महत्त्वपूर्ण छ: प्रयोगकर्ता समस्या समाधान गर्नुहोस् वा राम्रो ग्राहक अनुभव सिर्जना गर्नुहोस्?" एप्पल एट होममा सल्लाहकारका लागि।
"यदि तपाईंलाई कानुनी र नक्कली सिक्काको मिश्रणको साथ जग दिईन्छ भने, तपाईं यसलाई बाहिर निकाल्नुहुन्छ, यसलाई तीन पटक पल्टाउनुहोस् र तपाईं अनुक्रम 'हेड्स, हेड्स, टेलहरू' पाउनुहुन्छ, तपाईं कानुनी वा अ draw्कित गर्ने सम्भावनाहरू के के हुन्? नक्कली? " विश्लेषक
"तपाई कसरी टोस्टरको जाँच गर्नुहुन्छ?" गुण नियन्त्रण ईन्जिनियरका लागि।
मसँग केही थ्योरीहरू छन्, तर म तिनीहरूलाई भन्दिन। तपाईं के भन्नुहुन्छ? तपाईंसँग केहि उत्तर छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » धेरै » के तपाई एप्पलमा काम गर्न चाहानुहुन्छ? उनीहरूले तपाइँलाई के सोध्न सक्छन् हेर्नुहोस्
प्रश्नहरू तल सिन्ड्रोम को डिग्री सही हेर्न? बुह!
एक्वारोफिजिक्सलाई जवाफ दिनुहोस्
यस रोगबाट पीडित व्यक्तिहरूको लागि कस्तो सम्मानको कमी छ ... वा तपाईं अपरिपक्वताको बच्चा हुनुहुन्छ वा तपाईंलाई धेरै गम्भीर समस्या छ ...
यी प्रकारका मानिसहरूलाई ध्यान दिएर समय बर्बाद नगर्नुहोस्, तिनीहरू बन्द दिमागका र प्रतिभाको सint्केतबिना नै छन्। अभिवादन।
मफ्फोलाई जवाफ दिनुहोस्
हाहाहााहा यो रमाईलो छ कि तपाईंको सानो मस्तिष्कले केवल मूर्ख प्रश्नहरू उठायो जुन तिनीहरूसँगको पृष्ठभूमि हो। वाह तपाईंले उसलाई एक गधामा हराउनको लागि मर्न प्रतियोगितामा लग्नुपर्दछ! मूर्खता मा प्रख्यात यस मान्छे हाहाहा म तिमीलाई बधाई दिदैaએક્कोरोफिजिक्स!
हाहाहााहा यो रमाईलो छ कि तपाईंको सानो मस्तिष्कले उनीहरूको पृष्ठभूमि बिना नै मूर्ख प्रश्न उठायो। वाह तपाईं उसलाई एक गधामा हराउनको लागि एक मुर्न प्रतियोगितामा लग्नु पर्छ! मूर्खता मा प्रख्यात यस मान्छे हाहाहा म तिमीलाई बधाई दिदैaએક્कोरोफिजिक्स!
Wakandel अधिक भन्यो
अण्डाको साथ एक: इष्टतम समाधान एउटा हो जुन तपाईं यसलाई सम्भावित सबै प्रयासहरूको साथ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। के हुन्छ यो भवनमा भएका फर्शहरूको संख्यामा निर्भर गर्दछ। र अण्डाहरु को उदाहरण को लागी मलाई धेरै बेतुका लाग्दछ, किनभने एक अण्डा लगभग कुनै पनि मामला मा १ बिरूवा को उचाई को सामना गर्न सक्दैन। तिनीहरूले यसलाई अर्को प्रकारको वस्तुसँगै उठाउनुपर्‍यो, जसले अधिक फ्लोरहरू समात्न सक्छ, र भवनहरू भएका फ्लोरहरूको संख्या बढाउने छ, किनकि यसले अनुसरण गर्ने रणनीतिलाई चिन्हित गर्दछ। यदि हामी २०-तली भवन बनाउँछौं भने, उदाहरण को लागी, समाधान हुन्छ…।
पहिलो पटक छैठौं तलाबाट अण्डा फ्याक्नुहोस्। यदि यो टुट्छ भने, तपाईं १ देखि start देखि सुरू गर्नुहुन्छ (ताकि तपाईं अण्डाहरूको बाहिर भाग्नुहुन्न)। यदि यो टुट्दैन भने हामी ११ औं तलामा जान्छौं, र यदि यो विच्छेद भयो भने6देखि १० देखि सुरु गर्नुहोस् ... यदि यो ११ मा टुटेन भने, यो १ 1 बाट तानिन्छ।
पहिलो केस: यदि यो 1 मा भाँच्दछ भने, अधिकतम हामीसँग १ हुन्छ (broken भाँचेको अन्डा) २ (अन्डा नहुने १ को अण्डा) ((टुक्रिने छैन कि २ को अण्डा) (( of को अण्डा जुन भाँच्दैन) ((of को अण्डि break टुक्रिने छैन (of को अण्डो बिच्छेद हुन्छ वा हुँदैन)। त्यसैले यदि यो 6th औं तलामा टुक्रियो भने अधिकतम हामीले फ्याक्नु पर्ने हुन्छ। अण्डा 1 पटक।
दोस्रो केस: यो in मा भाँचिन सक्दैन र यदि ११ मा ) ((2 मा विच्छेद हुँदैन) ((ब्रेक हुँदैन वा १० मा ब्रेक हुँदैन)। यस अवस्थामा पनि, अधिकतम eggs अण्डा।
तेस्रो केस: यो or वा ११ मा टुक्रिदैन, तर यदि १ on मा। हामीसँग १ (यो on मा टुक्रिदैन) २ (यो ११ मा टुक्रिदैन) ((यो १3मा टुक्रिन्छ) ((कुनै ब्रेक छैन) १२) ((१6मा विच्छेद हुँदैन) ((१s मा ब्रेक हुन्छ वा हुँदैन)। फेरि cases केसहरू अधिकतम पहिलो तल्ला पत्ता लगाउँदछन् जहाँ यो भत्किन्छ।
Th चौथा केस: यो ,,११ वा १ on मा टुक्रिदैन, तर यसले १ on लाई गर्छ। यस अवस्थामा हामीसँग (१-२--4 ले ,,११,१ on मा विच्छेद गर्दैन) ((यो १ 6,11 मा बिच्छेद हुन्छ) 15 (यो १ 18 on मा टुक्रिदैन (यो ब्रेक हुन्छ वा १ on मा हुँदैन) फेरि उही समान 1 शटहरू अधिकमा।
अन्तिम केस यो हो कि यो कि त १ 18 मा टुक्रिदैन, त्यसो भए हामीसँग १ and र २० मात्र हुन्छ। यदि १ in मा हामीले यसलाई times पटक (,,११,१,,१)) फाल्यौं भने, हामीसँग पुग्न अधिकतम २ रोल हुन्छ। २०, यसैले बढीमा 19।
सुरूवात गर्न पहिलो तल्ला गणना गर्नको लागि सूत्र n * (n + 1) /2= भवन फ्लोरहरूको संख्या हुनेछ।
पहिलो प्रक्षेपण प्लान्ट एन मा बनाइनेछ
दोस्रो प्रक्षेपण यदि यो भाँचिएको छैन भने २n-१ फ्लोरमा बनाइनेछ
तेस्रो प्रक्षेपण (यदि यो भाँचिएको छैन भने) 3n-2 फ्लोरमा बनाइनेछ ...
यदि टुक्रिएको खण्डमा, माथिल्लो तल्लादेखि एक भाँच्न नसक्नेसम्म (जुन हामी जान्दछौं), हामी भुइँबाट भुइँमा जान्छौं।
यो निश्चित रूपमा २ अण्डाहरूको लागि मान्य छ। यदि त्यहाँ केवल १ अण्डाहरू थिए भने, त्यहाँ सधैं हो वा हो तल तल्लाबाट सुरू गर्न।
र यदि त्यहाँ अनन्त अन्डा छन् भने, तब यो सँधै भवनको बीचबाट पहिलो प्रक्षेपणको शुटि shooting गरेर र क्षेत्रको बीचमा जाँदा सीमा .्कन गरिनेछ। अभिवादन।
Wakandel More लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईंको उत्तर ठीक छ यदि तपाईं प्याडेन्ट जस्तो हेर्न चाहनुहुन्छ भने। यदि तपाईं पहिले जस्तो स्थापित भएकोमा टाँसनुभन्दा अझ कल्पनाशील र अलि बढी टाउको भएको व्यक्तिको जस्तो हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ उत्तम विकल्पहरू छन्।
ठिक छ, म संकल्पको लागि त्यो उत्तम विकल्प जान्न चाहन्छु। धन्यबाद। किन त्यो भन्नुहोस् र केहि नगर्नुहोस् ...
तपाईंलाई एक विचार दिनको लागि, eggs अण्डाहरूसहित तपाईं अधिकतम उचाई २ a7-मंजिला भवनमा परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ।
मैले वाकाण्डेललाई माया गरेको छु
एउटा the ० वटा क्रसको साथ सिक्का र १० अनुहारहरू सजिलो छ र ह्याचसँग। १० सिक्काहरू छुट्याइए, तिनीहरू जे भए पनि ... र तिनीहरू मार्छन्।
उदाहरण: हामी १० अलग गर्दछौं र १० महँगो हुन्छन् (व्यावहारिक रूपमा असम्भव)। यदि हामी ती सबैलाई फर्काउँछौं भने, त्यहाँ heads ० को समूहमा ० टाउको हुनेछ (किनकि हामीले भाग्यले ती सबैलाई पायौं) र हाम्रो टाउकोमा ० टाउको (किनकि हामीले सबै सिक्का फेर्‍यौं)।
यदि १० को समूहमा हामी heads टाउको लिन्छौं भने हामीले cros वटा क्रसहरू लिनेछौं र त्यहाँ heads टिपहरू ठूलो समूहमा हुनेछन् तर… जब हामी यसलाई फर्काउँछौं, हामी हाम्रो समूहमा faces अनुहारहरू छोड्छौं र अर्को in मा 10 ० को समूह। सरल। मैले परीक्षा गर्न १० सिक्का राखेको छु, हाहााहा।
स्याउ र सुन्तला
यो स्पष्ट छ कि एकमात्र संभावना "स्याउ र सुन्तला" लेबल एक खोल्ने हो, गलत लेबल भएकोले त्यहाँ भित्र केवल स्याउ वा केवल सुन्तलाहरू छन्। यदि फल भित्र एक सुन्तला रंग छ, त्यो मात्र सुन्तला ड्रअर हुनेछ। त्यहाँ उनीहरूसँग सम्बन्धित लेबलहरूको साथ २ ड्रअरहरू छन्, एउटाले भन्छ कि एप्पलले केवल स्याउ मात्र समावेश गर्न सक्दैन किनभने कथनले पहिले नै चेतावनी दिन्छ कि ती सबै गलत रूपमा लेबल गरिएको छ, त्यसैले त्यसमा एप्पल र ओरेन्ज समावेश हुने अन्तिम टोकरी हुने छ। उन्मूलन, केवल एप्पलको।
यदि फल एक एप्पल हो भने, त्यो केवल एप्पलको साथ एक हुनेछ र सुन्तलाको रूपमा लेबल गरिएको एउटा स्याउ र APP्ग र सANG्गठित हुनेछ, अर्को सES्गीतको हो।
यो एक सिक्का संग एक भन्दा सजिलो थियो। थप सहज।
एन्ड्रेस OCAMPO VALDEZ (@ GCocampo73) भन्यो
नमस्ते, यसले धेरै मेहनत लिदैन। अण्डाको उदाहरणमा। जहाँबाट यो फ्याँकिएको छ त्यसले भत्काउँछ जुन चीजलाई रोक्न सकिँदैन। उनीहरूले यहाँ के अनुरोध गर्छन् राम्रो प्याकेजि is्ग छ कि कमजोर वस्तुहरूको प्रतिरोध गर्दछ। अभिवादन।
ANDRES OCAMPO VALDEZ (@ GCocampo73) लाई जवाफ दिनुहोस्
टेलिग्राम फेरि अद्यावधिक गरियो नयाँ प्रकार्यहरू थपेर
आईफोन for को लागि एप्पल पेन्सिल? होईन